5 ရထားဖြင့်ဘရစ္စဘိန်းသည်ထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား >5ရထားဖြင့်ဘရစ္စဘိန်းသည်ထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများ
ဘရစ္စဘိန်းကွင်းစ်လန်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်ခြင်းဖြင့်မင်္ဂလာရှိ A-list ကိုဆွဲဆောင်မှု ပင်လယ်ပြင်ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့တူ, တောင်ပိုင်း Bank ၏ဒဏ်ငွေမြက်ခင်းပြင်များနှင့်ဥယျာဉ်, နှင့်ပုံပြင်တံတား, နှင့်များစွာသောပိုပြီး - သြစတြေးလျရဲ့ အရှည်ဆုံး cantilever တံတား.
ဒါဟာအစတစ်ဦးဖန်တီးမှုမြို့ရဲ့, နှင့် အတတ်ပညာ ပြတိုက်နှင့် ပြခန်း နှင့် chic ကဖေး aplenty, ပေါင်းကစုံလင် Springboard င် ရွှေကမ်းခြေကမ်းခြေ, ပင်လယ်, နှင့် လှိုင်း.
သငျသညျခရီးသွားလေ့ကျင့်ပေးရန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆိုရင်, ရထားလမ်းစနစ်များမြို့တော်ရဲ့ဗဟိုများမှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦများ နှင့်ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်း.
မြောက်ကိုရီးယားကမ်းရိုးတန်းလိုင်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်, ဗဟိုစခန်းမြို့အ network ရဲ့ဖြစ်ပါသည် အဓိကဘူတာရုံ နှင့်ဘရစ္စဘိန်းရဲ့ဗဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရိုင်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာပေါက်ကွဲသံကြီးတည်ရှိသည်.
ပြန်ဖွင့်လှစ် 1889, ယင်း၏ဂန္မျက်နှာစာ Anzac ရင်ပြင် overlooks ကကွင်းစ်လန်နှင့်သြစတြေးလျ၏ကျန်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်လမ်းကြောင်းများအတွက်အဓိကသွေးလွှတ်ကြောမယ့်.
သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့နီးကပ်စရာများလိုပါက, သပိတ် Charlotte Towers ဟိုတယ်မှာတစ်ဦးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရွေးဖြစ်ပါသည် - ကစျေးကြီးပြီး sumptuous အစုံတမြို့ skyline လျစ်လျူရှုတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုမရင့်.
ဘရစ္စဘိန်း Metro သေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မဟုတ်ပါဘူး - ဒါပေမယ့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်လျင်မြန်စွာကူးအပြောင်းစနစ်အပြည့်အဝငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြစ်ပါသည်, ဆောက်လုပ်ရေးဒီနှစ်စားရန်ဖြစ်တော်မူ၏အတွက်စတင်သည်နှင့်ကအများပြည်သူမှဖွင့်လှစ်သင့်ပါတယ် 2023.
တွင် 21 ကီလိုမီတာရှည်လျားသော, ဒါကြောင့်အစေခံပါလိမ့်မယ် 18 မြို့အနှံ့ဘူတာ, နှင့် ဒေသခံများက နှင့် ခရီးသွားဧည့် သူတို့နှစ်သက်သောအဖြစ်ရောနှောအပေါ်နဲ့ off ခုန်နိုင်ပါလိမ့်မည်.
ဒါဟာတစ်ဦးက $ 944 သန်းကုန်ကျမယ့်, ဒါပေမဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် ဘရစ္စဘိန်းရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘတ်စ်ကားပေါ်လျှော့ချပိတ်ဆို့မှုကိုနည်းဖိအားများပါဝင်သည်.
သင်အတိတ်ဆီကပေါက်ကွဲမှုချင်လျှင် (တဦးတည်းထက်ပိုမိုနည်းလမ်း), ဘရစ္စဘိန်းရဲ့ဦးခေါင်းကို ရိုးမား ပုံမှန်အဘို့အလမ်းဘူတာ ရထားတနင်္ဂနွေအဖြစ်အပျက် Steam.
အဆိုပါ genteel သစ်သားရထားအတွင်းမှအဆင့်နှငျ့သငျခကျြခငျြးတစ်ဦးထက်ပိုကြော့ခေတ်ပြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်, ဘရစ္စဘိန်းရဲ့အတိတ်တလျှောက်သင်နှင့်သင့်မိသားစု chug အဖြစ် အများဆုံးသာယာလှပ သောနေရာများ.
ဒါဟာအားလုံးအသက်အရွယ်များအတွက်ပျော်စရာင်, ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေ နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအထူးသဖြင့်ယင်း၏ Charm ခြင်းဖြင့်ယစ်နေကြတယ်.
ဒါဟာသြစတြေးလျရဲ့ရှေးအကျဆုံးမီးရထားအလုပ်ရုံ၌ကျိန်းဝပ်အနေနဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးအမွေအနှစ်အတွေ့အကြုံကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ရှားပါးရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းနှင့်အတူထုပ်ပိုးနေသည်, ကြီးမားသောစက်မှုစက်ပစ္စည်း, နှင့် Multi-မီဒီယာပြပွဲ.
ဘရစ္စဘိန်း လေဆိပ် Fonzie ဆရာတော်ကြီးနဲ့တူကဖေးများကတိုးမြှင့်ရဲ့အလုပ်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာဖြစ်ပါသည်, Transit Tavern ကဲ့သို့သောဘား, နှင့် Looking4.com တူသောယာဉ်ရပ်နားပံ့ပိုးပေး.
သို့သော်လေယာဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိမည်သူအများအပြားစွန့်စားဘို့, အဲဒီအကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအရာ Airtrain ဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါ 13 အလျင်အမြန်ကတည်းကဗဟိုဘူတာမှလေဆိပ်ကနေခရီးသွားများအတွက် spiriting ခဲ့ရဲ့ကီလိုမီတာခရီးသည်မီးရထားလမ်း 2001.
တစ်ဦးပင်ပန်းတယ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ပြီးနောက်, Airtrain ရုံအတွင်းမြို့လယ်ရန်သင့်အားသယ်ဆောင် 20 မိနစ် - တော်တော်အထင်ကြီး.
သငျသညျဘရစ္စဘိန်းမီးရထားခရီးသွားလာမှုအတွက်အကြံပေးချက်များရှိသည် Do? မှတ်ချက်များအပိုင်း၌၎င်း, သငျသညျဆိုပါကသူတို့ကို Share တစ်ဦးကရထားကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ရထားလိုအပ်ပါတယ်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့် link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-brisbane-train%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, သင် / ja မှ / fr သို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#ဘရစ္စဘိန်း #.ရာဝတီ သြစတြေးလျ ရထားဖြင့်ဘရစ္စဘိန်း ရထားအကြံပေးချက်များ
စကော့တလန်အတွက် Fife ထံမှရော်ဘီနေရာလေးကိုမိုးသီးသူတို့ကိုအဆိုပါထှကျတံတားကျော် trundling သူပထမဦးဆုံးမြင်ကတည်းကရထားစိတ်ဝင်စားတယ်ထားပြီး - လောက၏အအင်ဂျင်နီယာအံ့ဘွယ်သောအမှုများထဲမှတစ်ခု. အပြင်ရထားကနေ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, နှင့်ခရီးသွား, သူကအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအသားအတော်ပင်, ယဉျကြေးမှု, နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့နိုင်ငံရေး, စကော့, ဂျမေကာ Patois. - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ